Fifampiarahabana eny Iavoloha : Mbola tsy filoha vaovao no hitarika -
AccueilSongandinaFifampiarahabana eny Iavoloha : Mbola tsy filoha vaovao no hitarika
Hatreto izany dia mbola tsy ny filoha vaovao no hitarika ny lanonana eny Iavoloha, raha isaina ny tetiandro hamoahana ny voka-pifidianana ofisialy sy ny fepotoam-piasan’ny filoha teo aloha. Raha ny angom-baovao dia efa nisy ny fanasana izay efa voazara, ary efa nahazo ny anjarany ny filohana andrim-panjakana. Vivavinaina ny faha-7 ny volana janoary izao mantsy io lanonana eny Iavoloha io, araka ny vaovao voangona. Hatreto tokoa mantsy dia ho sarotra ho an’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny handinika ireo fitarainana am-pelatanan’izy ireo hatrany amin’ ny dimanjato sy arivo, izany hoe raha manao ny asany ara-dalàna ny HCC dia aorian’ ny faha-7 ny volana Janoary vao hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy izy ireo.
Raha ny tetiandro tsara ho fantatra ihany koa, dia ny faha-24 janoary vao tapitra ny fotoam-piasan’ny filoha teo aloha. Alohan’ io fe-potoana voafaritry ny lalàna io, dia efa tokony hisy ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy. Raha raisina ireo daty voafaritra ireo, dia mbola tsy ny filoha izany no hitarika ny lanonana etsy amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha amin’ ity taona ity. Hiandry ny taona vaovao kosa indray ny filoha ho lany vaovao izay ho lany eo, ka tsy nisy nanohitra ny fahalaniany vao hitarika lanonana etsy amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha.
Mbola tsy naharenesam-baovao kosa anefa ireo izay nasaina amin’ io lanonana voafaritra amin’ ny faha-7 ny volana Janoary io, satria isan’ny andrasan’ny maro ny mety ho fanasana ireo filoha roalahy izay nifaninana tamin’ ny fifidianana farany teo. Hanao ahoana ihany koa ny lanonana izay hotanterahina eny Iavoloha, satria ny fifidianana izay notanterahina aza feno hosoka sy tsy eken’ ny kandidà nifaninana. Mipetraka izany ny fanontaniana eto hoe, ilaina ve ny lanonana eny Iavoloha, raha toa mbola misy ny olana tokony hovahana eto amin’ ny tany sy ny firenena.